पुजारीलेनै ‘दलित’लाई बोकेर मन्दिर प्रवेश गराए ! – Himal Post | Online News Revolution
पुजारीलेनै ‘दलित’लाई बोकेर मन्दिर प्रवेश गराए !
himal post २०७५, ८ बैशाख १६:०२ April 21, 2018
एजेन्सी/हैदरावादमा पुजारीले एक दलितलाई काँधमा बोकेर मन्दिर छिराएको घटना अहिले भारतभर चर्चामा छ ।
यसलाई नाटकीय कदमको रुपमा हेरिएको छ किनकी विगतदेखिनै दलितहरुलाई मन्दिरमा प्रवेशमा निशेध गरिएको छ । हिन्दु रुढीवादीहरुले दलितहरुलाई अशुद्ध मान्दै आएका छन् । भारतमा आजको दिनसम्म पनि अधिकाशं हिन्दु मन्दिरहरुमा दलितलाई प्रवेश गर्न दिइँदैन ।
“म मानिसहरुलाई इश्वरको नजरमा सबै समान छन् भनेर देखाउन चाहन्थेँ।” पुजारी सी.एस. रङ्गराजनले भनेका छन् ।
हिन्दु धर्मको कठोर स्तरीकरणमा सबैभन्दा तल रहेका दलितहरु भारतीय उपमहाद्विपका सबैभन्दा दमित नागरिकहरु हुन् । उनीहरुको प्रतिरक्षा गर्न कानुनहरु बनेको भएता पनि दैनिक जीवनमा पटक पटक उनीहरुले भेदभाव सहनुपर्छ । भारतमा मात्र २ करोड दलितहरु रहेका छन् ।
परम्परादेखि उनीहरुलाई उच्च जातबाट अलग राखियो । उनीहरुलाई उच्च जाति जाने मन्दिर, स्कुल र यहाँ सम्मकी पानीका श्रोतहरु जस्तो इनारहरुमा निषेध गरिन्छ । उनीहरुमाथि कयैन पटक विभेद ,अपमान, शोषण र हिंसाको शिकार हुन्छन् ।
रङ्गराजन हैदरावादमा रहेको चर्चित चिलकुर मन्दिरको प्रमुख पुजारी हुन् । मन्दिर पसिसकेपछि रङ्गराजन र युवा दलित आदित्य(जसले नामको पहिलो भागमात्र प्रयोग गर्छन्) ले प्रर्थना र पुजा गरे ।
“दलितहरु विरुद्ध धेरै भेदभाव रहेको छ तर यो हाम्रो समाजबाटै उब्जिएको हो, धार्मिक ग्रन्धहरुबाट होइन,” आदित्यले भने । उनले आफूलाई धार्मिक व्यक्तिको रुपमा व्याख्या गरे । उनले वर्षौ हिन्दु ग्रन्ध र दार्शनिक लेखनको अध्ययनमा बिताएका छन् ।
रङ्गराजनले आफूले हालसालै सहभागीता जनाएको एक दलित पहिचान सम्बन्धी बहसबाट प्रभावित भएर यो काम गरेको बताए । एक विश्वविध्यालयमा बहशका क्रममा उनले विद्याथीहरुलाई सताब्दीऔं पुरानो एक मिथक भनेका थिए, जसमा एक दलित भक्तलाई पुजारीले काँधमा राखेर मन्दिर पसाएको कथा छ ।
मिथक अनुसार थ्रिउप्पन अलवर नामक एक भक्तलाई तमिल नाडूमा रहेको हिन्दुहरुको पवित्र मन्दिर श्रीरङ्गम मन्दिरमा प्रवेश गर्न रोकिन्छ । त्यसपछि उनी दिनभरी मन्दीर बाहिर भजन गाएर बस्न थाल्छन् । यो कुरा मन नपराएको एक साधुले उसलाई ढुण्ङ्गा हानेर भगाउन खोज्छन् । साधुको कर्मले अलवर रगतपक्ष भएर त्यहाँबाट हिँड्छ ।
कथाका अनुसार जब साधु मन्दिरमा पस्दछ भित्र मुर्तीबाट पनि रगत आइरहेको पाउछ । त्यसपछि आफ्नो गल्ति महसुस गरेर साधुले अलवरलाई काँधमा बोकेर मन्दिर प्रबेश गराएको जनयुक्ति छ ।
आज अबलर एक सम्मानित साधु मानिन्छन् ।
जब रङ्गराजनले विद्यार्थीहरुको अगाडी यो कथा भने केही दलित विद्यार्थीहरुले यसमा शंका व्यक्त गरे । तीनले उनलाई आजको दिनमा कुनै मन्दिरका पुजारीले त्यसो गर्न सक्छन् प्रश्न गरे । प्रश्न सुनेपछि उनी आफैले यो कार्य गर्ने निर्णय गरे ।
“म अरुले पनि यस्तै गरुन् भन्ने आस गर्दछु । मेरो अर्थ सबैले दलितलाई काँधमै बोक्नुपर्छ भनेको होइन । तर तिनले दलितहरुलाई मन्दिरमा स्वागत गर्नै पर्छ,” रङ्गराजनले भने ।
आदित्यले बीबीसीसँग आफूले परिवर्तनको आसा गरेको बताउदै आफ्नो गाँउमा दलितहरुलाई मन्दिर प्रवेश गर्न बन्देज रहेको बताए ।
उनले रङ्गराजनले आफूलाई बोकिरहदा उपस्थित रहेका अरु पुजारीहरुले पनि आफूले काम गर्ने मन्दिरमा यस्तै गर्ने घोषणा गरेको बताए ।
“हामीहरु अरुको काँधमा बोकिन चाहदैनौं । हामीले खासमा चाहेको उदारता र सम्मान हो । हामी समुदायको हिस्सा हुन चाहन्छौं ।” तिलकले भने ।
तर सबै यत्तिकै आसाबादी छैनन् ।
“यो घटनाले केही बढी दलितहरुलाई मन्दिर प्रबेश सम्भव पार्न सक्छ तर बाँकी सुधारको कुरामा शंका लाग्छ । जाति प्रथा हिन्दु धर्मको अनिवार्य हिस्सा हो ।” कलेजकी प्रध्यापक रहेकी एक दलित अभियन्ता सुजाथा सुरेपाल्लीले भनिन् ।
उनको टिप्पणी पछिल्लो समय दलित र उच्च जाति हिन्दुहरुबीच तनाब बढीरहदा आएको हो ।
अभियन्ताहरुले पछिल्लो समय युवा दलितहरुमा बढेको उत्साह र मेहनतले दलितहरुको जीवनमा सुधार भइरहेको बताए । यो सँगसँगै यसलाई स्वीकार गर्न नसकेका उच्च जातिहरुबाट दलितहरु माथि पनि हिंसा बढीरहेको छ ।
हालसालै भारतको सर्बोच्च अदालतले दलितहरुको संरक्षण गर्ने एक कानुन हटाएको विरोधमा दलितहरुले विशाल विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यो विरोधको क्रममा आठ जना मानिसहरुको ज्यान गएको थियो ।
कैलालीमा लागुऔषध चरेससहित २ जना पक्राउ
‘अल्लाह’को नाममा साउदीसंग श्रम सम्झौता रोकियो !